DHAQANKA DHAQANKA - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
Marka hore, aan kuu sharaxno farqiga weyn ee u dhexeeya xulashada dharkaaga keydkeena ama dharka caadiga ah.
1, - Dharka kaydka ayaa si sax ah ula mid ah dharka caadada ah, laakiin leh xulashooyin kayar. Waxaa lagu dooran karaa halabuur diyaar ah iyo midab & ma aha haraaga. waxaa toos loogu diri doonaa bakhaarkeena. PO kasta waxaan ka bilaabaynaa inaan ka goyno isla marka aan helno deebaajigaaga.
2, - Dhar khaas ah, waxaad u xilsaari kartaa halabuurka, midabka, midabku dhakhso, miisaanka, shaqada, dib loo warshadeeyay, iwm, badanaa waxay qaadataa in ka badan 5 toddobaad, dharka kaydka ayaa u baahan oo keliya toddobaadyo 2-3, uma baahna inuu dad badan isku buuxiyo faahfaahinta, waqtiga gaarka ahi waxay kuxirantahay tirada.
Degdeg ah Adeegga Suuqa
Magacyada bilowga ah ama kuwa doorbida inay dalbadaan wax yar & inbadan, waxay kaheli doonaan dalab kaydka inay udub dhexaad u noqdaan koritaanka sumadaha. Sababaha oo fudud.
Dib-u-dalbashada shirkadaha badankood waxay qaadan doontaa ugu yaraan laba bilood in la sameeyo. Waxaan hiigsaneynaa inaan soo saarno dhammaan dib-u-amarrada iyadoo la adeegsanayo dharka dharka keliya shan toddobaad. Taasi waa xawaare hillaac ah oo wax alaab-qeybiye ahi aanu bixin karin. Sugitaanka bilaha ugu dambeeya waxay noqon kartaa dhimashada summad leh alaab maqan, qaabab, midabyo ama cabbirro la iibiyey & arag macaamiishaada oo u guuraya noocyo kale si ay alaabtooda uga iibsadaan.
Markaad sii korayso & aad dhisayso tiro wanaagsan oo raacayaal ah, waxaad awoodi doontaa inaad horay u sii qorshayso PO-gaaga soo socda & aad horay u sii amarto makiinadahaaga aad u baahan tahay si aan waqti ugu lumin wax-soo-saarka leh dharka caadada ah.
Waxaan si dhow ula shaqeynaa magacyadeenna oo waxaan ka caawinnaa inay sii qorsheeyaan dib-u-dalbashada ama kor u qaadista iyo inay wax u diyaar garoobaan & u diyaargaroobaan si marka amarka dhabta ahi u yimaado, dhammaanteen waxaan u diyaar garoobaynaa inaan tagno maalinta amarka la dhigay.
1. Xilli kasta wuxuu arki doonaa midabbo cusub oo ku soo socda isbeddel; sidaa darteed, midabada waa la cusbooneysiiyaa lixdii biloodba mar.
2. Haddii aad codsato dhar aan ku jirin keydka, fadlan nala soo socodsii, waxaan raadineynaa isku mid ama wixii la mid ah.
Dharka midabada & Qaabka Muuqaalada
Hoos waxaan ku taxnaa dhar badan, midab caadi ah ama dheeh xira ama qaab daabacan oo dijitaal ah si aad tixraac ugu sameyso. Tani waxay kuu xaqiijineysaa in tayada dharka lagu dhex daray dharkaaga Firfircoon ay noqon doonto heerka ugu sarreeya adduunka marka loo eego Lululemon, haddii aysan xitaa ka fiicneyn qoyaanka qoynta, cadaadiska iyo astaamaha kor u qaadka jirka. Labadaba waa la dalban karaa cad & daabac.